Nkọwa na ilekọta osisi apụl maka ìgwè dị n'etiti - Osisi Apple maka ọkpụkpọ nkewa - 2019
Iche iche nke osisi apụl maka ìgwè dị n'etiti - ọrụ ebube nke anwụ na-acha
Ikekwe ọ dịghị onye na-adịghị enwe mmasị na-atọ ụtọ nke apụl. Aporo bụ mkpụrụ osisi oge ochie, ọ dịkwa ezigbo uru. Mkpụrụ a metụtara ọtụtụ akụkọ ifo na akụkọ ifo, na-amalite site na akụkọ mbụ nke Akwụkwọ Nsọ nke Adam na Iv.
Ọ bụghị naanị otu apụl aghọwo mkpụrụ na-emepụta ihe na mkpụrụ osisi, nke pụtara n'ọtụtụ akụkọ ifo.
Nke a bụ mkpụrụ mara ezigbo mma na nke dị ụtọ. Ọ bara ọgaranya na vitamin na anụ ahụ.
Nke a bụ naanị mkpụrụ osisi nwere ike ịchekwa ruo ogologo oge - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ruo owuwe ihe ubi ọzọ.
Otu apụl bụ panacea maka ọrịa niile. Na-eri apụl mgbe nile, onye na-enye onwe ya nsogbu kachasị ike. Tụkwasị na nke a, mkpụrụ a dị ka mgbochi ma ọ bụ grated na-emeso afọ mgbu, nsị na nsogbu ndị ọzọ nke ahụ.
N'ụwa, e nwere ụdị osisi apụl dị iche iche. Anyị ga-akwụsị ma kwuo banyere ụdị ndị ahụ bụ mkpụrụ kachasị mma ma zụlite n'etiti mpaghara ihu igwe.
Nkọwa nke iche
Osisi Apple Ogige ahụ bụ otu n'ime osisi ndị kachasị mkpa maka ezigbo ogige. Onye ọ bụla maara na maka ịkụ chara chaa na acclimatization nke mkpụrụ osisi, nakwa dị ka mkpụrụ osisi ha dị ukwuu, nhọrọ ziri ezi nke ụdị dịgasị iche iche bụ ihe kachasị mkpa - ụdị dị iche iche ndị a, ala na ebe nrịta dị mma.
Mpaghara ikuku onodu ubochi di iche iche bu ihe ndi mmadu na-acho uzo na oge oyi na oge oyi, nakwa oke iru mmiri. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa na ọ ga-ahọrọ ụdị osisi ọ bụla na-eguzogide ntu oyi, gụnyere apple osisi.
Na ụdị osisi apụl na-etolite kachasị mma na mpaghara mpaghara ihu igwe Nke a gụnyere ụdị apụl: Alesya, Antya, Antonovka Dessert, Antonovka New, Antonovka Vulgaris, Summer Arcades, Arkadik, Aphrodite, Aelita, nne nne, Banana, Velvet, Belarusian Synapse, Belarusian Raspberry, Belarusian Sweets, Belfler Chinese, Michurinian Beaver Seedless, Beetroot, Belarusian Raspberry, Belarusian Sweets bogatyr, bolotovskoe, borovinka, boleninka painiapulu,
Bratchud (nwanna nke ọrụ ebube), cowberry, bryansk, ego, venyaminovskoe, verbnae, vesyalina, veteran, cherry, ugwu-altai, pearka moscow, obere ube, beunak, dessert, nwa, macintosh nwa, elena, chọrọ, Zhiguli, pyramid , oyi na-enweghị atụ, ọlaedo mgbụsị akwụkwọ, Zorynka, Iksha, IMANT, IMRUS, Kandil Ostrovsky, Cypress, Chinese mbụ ọlaedo, Kerị Ker, Kovalenko, kape, swiiti, Korean (mgbụsị akwụkwọ undersized),
Okpukpo osisi cinnamon, ịgba egwu, ịma mma nke ubi, na-acha uhie uhie, Kulikovo, Kurnakovskoye, na-egbuke egbuke, fry, mantte, medunitsa, ọsụ ụzọ Orlovsky, Melba, nrọ, Minsk, ebe nchekwa Isaev, Moscow (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ), Moscow, emesị, nadzeyny, eagle, na-agbapụ ọcha, ndi mmadu, ndi nwere ike, Olympic, Orlik, Oryol Polesye, ụbịa uhie, oge mgbụsị akwụkwọ ọṅụ, ebe nchekwa Tikhomirov, ebe nchekwa nke agha, ebe nchekwa Isaev,
ebe nchekwa nke Syubarova, ebe nchekwa nke Sikora, ebe nchekwa Syubarova, papirovka, pepin saffron, ọsụ ụzọ, plastun, onyinye na ọnụ, snowdrop, multivitamin, oryol, prompek, president, mundane, rashid, Christmas, Russian, sugar sugar, synapse, otuto nye ndị na- ndị mmeri), Slav, Slav, Sokolov, anyanwụ, stroevskoe, nwa akwụkwọ, suylepskoe, syabryna, ụbọchị tatyanin, mmeri, Ural nnukwu, obi ụtọ,
Welsey, Charavnitsa, Chapnikovskoe, Chelkash, Celandine, Echekwaa Apple, ebube, crocus, nnapụta 3-5-16 (onyinye Isaev), ọkachamara 6M-1-3, mkpụrụ ndụ jubilii, nwa na-eto eto, ọla amba.
A na-ekewa ndị a niile iche iche dị iche iche, dị ka ụdị okpomọkụ, mbubreyo oge okpomọkụ, ụdị mgbụsị akwụkwọ na ụdị oyi. Akwukwo apụl nile di iche n'etiti onwe ha site na oge nmuta nke nkpuru, nha na uto ha.
Ọ na-atọ ụtọ ịgụ banyere ụdị cherị dị iche iche maka ìgwè dị n'etiti
Apụl dị mma ma ọ bụ mkpụrụ osisi tọrọ ụtọ, ndị bara ọgaranya na vitamin. Mkpụrụ ndị a dị mma nwere vitamin A na C, B vitamin, ígwè, flavonoids, eriri, malic na tartaric acid, pectin. Ihe ndị a niile dị mkpa maka normalization nke mgbaze, ibu, normalization nke usoro ụjọ, na-enye aka na metabolism na usoro obi.
Nri na nha nke mkpụrụ ya, oge ya na oge nchekwa ya na-adabere n'ọtụtụ osisi apụl. Nọgidenụ nkọwa nke ụdị apụl ndị kachasị ewu ewu maka eriri ihu igwe.
Ọdịiche dị iche iche nwere ihe ọkpụkpụ na-egbuke egbuke (150 g), odo na agba na-acha ọcha na-acha ọcha ọcha-ụtọ pulp, nke nwere obi ụtọ ala ọkụ. Were mkpụrụ nke Anthea site na December ruo April.
Kpa Antonovka ihe nzacha nwere nnukwu mkpụrụ osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke nwere ihe dị ka 150-200 g. Nke a bụ mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ nke na-atọ ụtọ n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Akpa Antonovka ọtụtụ dị iche, ma ọkara na nnukwu (100-250 g). Ha na-eto eto na-acha odo odo, ụtọ-utoojoo uto na oke kemmiri ihe na keisi pulp.
Nwa ebu n'afọ nwere apple arcade okpomọkụnke ripen na mbubreyo okpomọkụ. Mkpụrụ ahụ nwere ọdịdị nke yiri iko, bụ nke dị ntakịrị ka ọ dị mkpịsị elu, na agba odo-acha odo odo, ma n'otu oge ahụ, ọ na-acha ọcha-nke na-acha ọcha, nke na-atọ ụtọ. Oge okpomọkụ dị iche iche dị iche iche na mkpụrụ ya dị obere (ụbọchị 7-10) echekwara ya na mpempe akwụkwọ.
A na-agbaju mkpụrụ dị ukwuu na mkpụrụ osisi. iche Aphrodite (125 g) Akwukwo acha odo odo a nwere ihe di nro, nke oma, mmanu mmanu, nke onwunwu na ocha di nma, nke na-acha uhie uhie nke oma-grained juicy uto-sweet pulp. Mkpụrụ ndị ahụ chara n'onwe n'oge mgbụsị akwụkwọ ma chekwaa ha n'ime ngwa nju oyi ruo na ngwụsị December.
Nchacha odo-gburugburu Mkpụrụ osisi dị iche iche nke Banana apụl dịgasị iche n'ogologo (ca. 140g) na ọhụụ mara mma na n'akụkụ. Ha nwere anụ ọcha na-acha ọcha, nke dị oke, na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ na uto. Rie mkpụrụ osisi dị iche iche na December - May.
Onye China Belle Fler nwere nnukwu oval, buru ibu buru ibu, ugbua richapu apụl (ruo 800g). Mkpụrụ nke a dịgasị iche iche bụ ìhè akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba, nke ripening na mbụ whitens, mgbe ahụ, atụgharị pink na-acha ọbara ọbara na pink stripes. Mkpụrụ ndị ahụ dị nnọọ nro, nnukwu, na-acha ọcha snow-ọcha, uto-ụtọ pulp na ụtọ uto. Ghọta mkpụrụ osisi n'oge mbido, na-echekwa ha ruo na November.
Mkpụrụ apple osisi Veteran ripen n'oge mgbụsị akwụkwọ ma chekwaa ruo n'oge opupu ihe ubi. Ndị a bụ mkpụrụ osisi buru ibu, nke dị ntakịrị, dị ntakịrị conical n'elu (140-160 g), nwee agba agba odo odo na specks na ohia oroma buru ibu. Anụ nke mkpụrụ osisi ahụ dị nro ma dị ụtọ, na-acha odo odo-edo edo na agba, na-enwe ụtọ uto.
Dịgasị iche iche Grushivka Moscow nwere mkpụrụ osisi dị nta (25-50g), ụdị nke a na-agba gburugburu, acha odo odo-acha odo odo na-acha uhie uhie na uhie. Mkpụrụ dị nnọọ nro na kemmiri ihe, ụtọ na utoojoo na-esi ísì ụtọ.
Mkpụrụ iche Zaryanka dịgasị iche nke buru ibu karịa nkezi, gbakọọ ya n'ụdị dị nro, inwe agba ude na-acha uhie uhie na ntanye dị nwayọọ. Ọ nwere anụ ọcha, ụtọ uto na-esi ísì ụtọ.
Ụdị Mgbụsị akwụkwọ Dịgasị iche iche ọ bụ nnukwu odo odo na-acha ọcha, nke na-acha ọcha, nke na-acha ọbara ọbara, nke na-atọ ụtọ. Osisi a na-egbute site na September ma chekwaa maka ihe dịka otu ọnwa.
Mkpụrụ Chinese oge mbụ ma ọ bụ obere (30-40g), nwere agba odo odo na obere ntụpọ. Ha pulp bụ creamy, dị ụtọ, ezigbo aromatic, uto-ụtọ na obi ụtọ na uto. Na-anakọta mkpụrụ osisi na July ma jiri ya maka 7-10 ụbọchị, n'ihi na echeghị ha.
Nkume ọcha nwere ìhè ọkara, acha acha ọcha acha ọcha achacha acha, achacha acha. Anụ nke mkpụrụ osisi ahụ na-acha ọcha-acha ọcha na ụtọ uto. A na-ewepụ mkpụrụ n'ime etiti okpomọkụ ma chekwaa ihe karịrị ụbọchị 15.
Egwu Ọ nwere ihe ọkara dị ntakịrị, mkpụrụ osisi conical na-ejikọta ọnụ, nke nwere ihe dị mkpa na-acha odo odo. Anụ nke mkpụrụ osisi ahụ na-acha ọcha, ụtọ na utoojoo, enwere ísì ụtọ. A na-eri mkpụrụ na August. A na echekwa ha ruo ogologo oge - naanị 14-15 ụbọchị.
Mkpụrụ Slavyanka nwere uto magburu onwe ya ma dị mma, na-egbuke egbuke, mmanu mmanu, odo odo. Ndị a bụ mkpụrụ osisi dị nro nke na-adịkarị ala na-atọ ụtọ, nke a na-adọwa n'etiti etiti mgbụsị akwụkwọ ma chekwaa ruo mgbe etiti oyi, ma ọ bụ ọbụna March.
Mkpụrụ Ụdị Saffron - Ndị a bụ nnukwu mkpụrụ osisi conical dị iche iche na nnukwu ọgịrịga. Apụl nwere agba odo-acha acha odo odo, nke nwere ọgaranya na-adaba na mkpụrụ osisi ahụ dum. Anụ ahụ ha dị ntakịrị greenish, nke na-atọ ụtọ, ụtọ dị ụtọ nke nwere uto uto. Akpa Ripen n'etiti mgbụsị akwụkwọ ma chekwaa ruo etiti afọ Febụwarị.
Osisi nile nke osisi osisi di iche n'etiti onwe ha n'udi okpueze, idi elu nke uto, uto nkpuru osisi na oge nke ntozu ha. Iji họrọ osisi apụl ọma, ọ dị mkpa ka ị mara kpọmkwem ihe ubi gị chọrọ na ụdị osisi na osisi ga-adabara ya.
Ọfụiche Okpiri na osisi kolisi, ha nwere ebe kachasị mma n'ime ogige, osisi ndị yiri osisi, nke nwere ọkara na obere ebe, yana osisi dị ogologo na ogologo, nke nwere akụkụ buru ibu na ọkara. Kedu ụdị nke mpaghara akuku, ga-adabere n'ụdị okpueze ị na-ahọrọ osisi.
Uru nke ụdị apụl nile, nke kachasị mma maka ịgha mkpụrụ n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe, na-agụnye mmụba ha na-eguzogide ọrịa dịgasị iche iche, nakwa ọtụtụ mkpụrụ nke ọtụtụ ụdị. Site na nhọrọ dị mma nke sapling na oge nke mbubata ya, ụdị osisi apụl dị iche iche na-agbanye mgbọrọgwụ ma buru oke mkpụrụ.
N'adịghị emezighị emezi nke mkpụrụ osisi apụl maka ìgwè ndị na-ahụ maka oké ifufe bụ nsogbu ha megide ọrịa ọrịa scab, nke na-emebi osisi ahụ n'ụzọ dị ukwuu, ọbụnakwa nwedịrị ike ịnwụ. N'ime ụkọ ihe dị iche iche nke ụdị a, ekwesịrị ịdebe adịghị ike nke okpomọkụ, nke, dị ka a rụpụtara, chọrọ nchedo osisi ndị a na-emebi emebi site na ntu oyi.
Ugbo anu ulo anyi choro nlekọta na ilekọta. Na otu esi eme ya ugbu a, anyị ga-agwa gị.
Kwachaa alaka osisi apụl bụ ihe ndabere maka nlekọta osisi a dị ebube. A na-akpụ okpueze kwa afọ na nwa osisi. Site n'ịgbaso usoro a na okechaa oge kwesịrị ekwesị, a ga-enwe ike ịmalite mkpụrụ osisi n'oge mbụ. Tụkwasị na nke ahụ, osisi ndị dị mma ga-adị ndụ ogologo oge, ha agaghị atụ egwu obere okpomọkụ ma ga-abawanye uru.
Mbido mbụ osisi na-eme tupu buds amalite na mmalite oge opupu ihe ubi n'afọ nke abụọ mgbe ị kụrụ. Maka itolite na nhazi alaka isi na-ebipụ ogwe osisi ahụ. Iru úgwù dị otú ahụ na-akwụsịkwa ngwa ngwa nke osisi ahụ. A na-ejikọta ọganihu nke afọ gara aga na mmiri site na nke atọ nke ogologo - nke a na-akwalite nhazi na uto nke alaka osisi.
N'osisi ahụ, mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi na-amịpụtakwa. A na-eme nke a ozugbo e guzobere ha, mgbe ha na-ewepụ mkpụrụ osisi dị n'etiti etiti. Mkpụrụ nile nke ọdịdị na-adịghị mma na-ezighị ezi na-ewepụkwa ya. N'ihe banyere nkpọkasị siri ike nke apụl, iji zere ugboro ole ị na-amị mkpụrụ, ọ na-esi n'ahụ ọ bụla nke ovary ahụ, mgbe ọ na-ahapụ otu mkpụrụ ma ọ bụ abụọ.
Osisi osisi, gụnyere osisi apụl, chọrọ njikọta fertilization mgbe nile. Nke a na-enye osisi ahụ na-eto eto ma na-emepụta mkpụrụ. Na enweghi oke zuru oke nke ihe di mkpa n'ime ala, osisi adighi eto, akwukwo ha na-acha odo odo, mkpuru osisi adighi nma na mkpuru osisi adighi-eto na agba, ndi Ome anaghi etolite, buds adighi emepe.
Iji zere ihe ndị a nile, osisi ahụ ga-enye nri nri, nke e kewara n'ime organic na ịnweta.
Fatịlaịza ndị na-edozi nri bụ nri na ụdị ihe oriri ọ bụla a na-etinye kwa afọ. Nri mmanu gụnyere nitrogen fatịlaịza, phosphate na potash. Ha na-eme otu ụkpụrụ na n'otu nha.
Nke dị oke mkpa maka mmepe na uto nke osisi ọ bụla bụ mmiri mmiri zuru ezu nke ala nke osisi ahụ na-eto. Karịsịa ndị na-eto eto chọrọ nanị ịgbara mmiri, ma ọ bụ nanị kụrụ osisi ndị a na-agba mmiri ugboro 3-4 n'oge okpomọkụ, na-awụsa mmiri atọ ma ọ bụ anọ na mmiri na otu. Mgbe nke ahụ gasịrị, mmiri mmiri mulch humus ma ọ bụ ala na-adịghị mma.
A na-agbaju osisi Apple na mmiri akọrọ. A na-emepụta ya na mmalite oge opupu ihe ubi tupu oge ezumike, ụbọchị 20 mgbe okooko gasịrị, ụbọchị 20 tupu owuwe ihe ubi na ahịhịa. N'oge oge nke mkpụrụ osisi, a kwụsịrị ịgbara mmiri, dịka ịgbara mmiri nwere ike iduga ha.
Na oyi oyi, a na-ejupụta ala osisi pristvolny nke osisi apụl site n'enyemaka nke humus, peat, ma ọ bụ compost, na spud. Iji chebe onwe ha pụọ ​​na ọkụ na ụrọ ndị ọzọ, akpọrọ osisi ahụ na alaka osisi, ya na nzube a na-ejikwa akpụkpọ anụ ma ọ bụ ahịhịa amị.
N'otu oge ahụ, a na-echebe osisi ahụ site na òké n'oge oyi ọ bụla maka afọ ise, nke a na-eme ruo mgbe osisi dị ike ma ogbugbo ha na-aghọ ihe ike. A na-eme ka osisi na-eto eto dị ọcha na ihe ngwọta nke nzu, na ndị tozuru etozu nwere ngwọta nke wayo. N'oge mgbada ahụ, a na-azọda snow n'okpuru osisi.
Ntu osisi maka osisi kwadebere otu ọnwa tupu akuku. Nke a dị mkpa maka ala ala. A na-akụ ndị na-eto eto na ọdịda na mmiri. Ọ bụrụ na omenala ndị ọzọ tolitere na saịtị osisi na-akụ, ọ dịghị mma ịzụ ala, n'ihi na nke a ga-akpali akpali nke mkpokọta osisi.
Mgbe ọ na-akụ ya dị mkpa iji hụ na olu nke mgbọrọgwụ ahụ dị 6 cm n'elu ala, ebe a na-agbatị mgbọrọgwụ ma kpuchie ya na ụwa, nke a na-atụnye ya ma ọ bụ ụkwụ ma ọ bụ ụdị ọrụ dị arọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, osisi ahụ jupụtara na mmiri ma jikọta ya. Ọ dị mma ịkụ mkpụrụ osisi na ájá na mmiri mmiri.
Ndụ niile dị na mbara ụwa anyị hụrụ nlekọta na nlekọta. Nye ihe a niile n'osisi, ha ga-eji obi ụtọ na-emeso gị ihe kwa afọ iji nweta oke ihe ubi.
Umu kpalakwukwu na ndi bi n'obodo
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Iche iche nke osisi apụl maka ìgwè dị n'etiti - ọrụ ebube nke anwụ na-acha